Falaanqeyn: Dib-u-doorashada Madaxweynaha Maamulka Jubbaland – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
Madaxweynaha Maamulka KMG ee Jubbaland, Axmed Maxamed Islaam “Axmed Madoobe” ayaa maanta ku guuleystay Doorashadda Madaxtinimadda Maamulka Jubbaland, oo ay kula baratameen dhowr Musharax.
74 Xildhibaan oo ka tirsan Barlamaankii Jubbaland ee la kala diray ayaana ahaa Cod-bixiyayaasha Doorashadaasi oo ay ku loolameen Axmed Madoobe, Cusmaan Xuseen Xaaji Fayruus iyo Hilowle Aadan.
Cod-bixinta ayaa socotay xilli kooban, kadib, markii uu Hoggaamiyaha Jubbaland ku guuleystay 68 dhibcood, waxaana markii lagu dhawaaqay guushiisa Madasha Cod-bixinta ka bilowday dabaaldeg ballaaran, oo markii dambe is-qabsaday ilaa magaalladda Kismaayo.
Dabaaldegaasi ayaa waxaa kaloo ka qeyb galay Ciiddanka Maamulkaasi oo noocyadda rasaasta hawada sare u ridayey.
Farxadda iyo guusha Madaxweynenimo ee Axmed Madoobe ayaa waxaa durbadiiba lagala hor yimid mucaaradnimo, iyadoo ay Siyaasiyiinta ka soo jeeda Goballadda Jubbooyinka ku tilmaameen Doorasha la been abuuray.
Xildhibaanadda ka tirsan Barlamaanka Federalka Somalia ee ka soo jeeda Beelaha deggan Goballadda Jubbooyinka iyo Gedo ayaa sheegay inaysan Doorashadaasi ku dhicin si Sharci ah oo waafaqsan Dastuurka Qaranka iyo Nidaamka Federalka.
Dowladda Federalka Somalia ayaan weli ka hadlin Doorashadaasi, balse waxaa jira dhaliilo muujinayo inaan Doorashadda Jubbaland laga soo dhisin Aasaaska iyo Dib-u-heshisiinta Beelaha, waxaana ka maqan Maqaamkii Odayaasha Dhaqanka ee Beelaha wada deggan Goballadda Jubbooyinka iyo Gedo ee Dhismaha Maamul-gobaleedyadda.
Waa hubaal in Nidaamka Axmed Madoobe lagu doortay maanta ku heer ahayn Nidaamkii lagu doortay Madaxweyneyaasha K/Galbeed iyo Gal-mudug, oo iyagu Doorasho Adag u soo galay Tartanka Madaxtinimo.
Ma kala cadda sida ay Dowladda Federalka iyo Beesha Caalamka u qiimeyn doonaan Doorashadaasi, inkastoo ay suurtogal tahay inay Urur-gobaleedka, gaar ajaan dalalka deriska ee Kenya iyo Ethiopia u soo dhaweeyaan Doorashadaasi, iyagoo eeganayo Danaha Qarankooda.
Xeeldheerayaasha ayaa waxay su’aal ka keeneen Waxqabadkii Maamulkii Axmed Madoobe ee dhowrkii sanno ee uu gacanta ku haya Jubbooyinka iyagoo taageero ka helayo Ciiddanka Kenya ee qeybta ka ah Hawlgalka AMISOM.
Waa hubaal inuu Maamulkiisa hannan kari la’ yahay Taageeradda Siyaasiyiinta, Saraakiisha iyo Ururradda Bulshadda ee inta badan Beelaha ku wada nool Jubbooyinka, kuwaasi oo iyagu saluugsan Nidaamka Hoggaamineed ee Maamulkaasi.
Saraakiisha madaxa bananan ayaa rumeysan inuu Axmed Madoobe culayska saaray dhinaca Ciiddanka, wuxuuna xushay inay Maleeshiyaddiisa Raas Kambooni noqdaan kuwa looga dambeeyo Talada Ciiddanka.
Sidoo kale, Maamulka Axmed Madoobe waxa uu si xirfad leh u hakiyey Hawlgalkoo Dagaalka ee uu hor boodi jirey markii uu ka tirsanaa Ururadda Alshabaab iyo Xisbul-islaam, waxayna Maamulkiisa ku mashquuleen inay Ciiddanka Kenya ku bahoobaan Qeybsiga Dhuxusha sharci-darradda looga dhoofiyo Dekedda Kismaayo iyo Badeecadaha Kontorobaanka ee u kala gudba xuduudka Kenya iyo Somalia.
Waxay dadka Reer Kismaayo dhaban-hays ka qaadeen halka ay maraan Malaayiinta Dollar ee bil kasta ka soo xeroota Dekedda iyo Garoonka Diyaaradaha ee Kismaayo, waxaana hubaal inaysan jirin Adeegyo Bulsho oo lagu kharaj gareeyo Kharajkaasi.
Xaalladda Nolosha dadka ku nool Goballadda Jubbooyinka iyo Gedo ayaa waxay weli yihiin kuwo aad u liita, waxayna cabashadda ugu badan ka timaada dadka danyarta iyo Barakacayaasha ku sugan Xerooyinka ka oodan gudaha iyo duleedka Kismaayo.
Maamulka Axmed Madoobe waxaa kaloo lagu dhaliilaa inuusan hagaajinin Xiriirka uu la leeyahay Dowladda Dhexe iyo Dowlad-gobaleedyadda, marka laga reebo Maamulka Puntland oo ay leeyihiin Isbahaysi dhow oo dhinacyadda Siyaasadda iyo Beelnimadda.
Safaradda joogtadda ee uu Madaxweyne Axmed Mdoobe ku tago dalka Ethiopia ayaa tuhun ballaaran abuuray, waxayna dadka naqdiya Axmed Madoobe sheegaan inuu kala garan la’ yahay inuu Maamulkiisa hoos tago Dowladda Ethiopia ama Dowladda Federalka Somalia.
Waxaana su’aal adag noqon karta qaabka ay Xildhibaanadda Barlamaanka Federalka uga degi karto inay Xildhibaanaddii Barlamaanka Jubbaland ee ay horey loo kala diray u noqdeen Cod-bixiyaal u dooran kara Axmed Madoobe inuu noqdo Madaxweynaha Maamulka Jubbaland ee afarta sanno ee soo socota.
Si kastaba ha ahaatee, Doorashadda Axmed Madoobe ayaa lagu tilmaami karaa mid uu mugdi ku jiro Sharci ahaanshaha Maamulkiisa, waxaana suurtogal ah inay mar kale abuurmaan Xiisado Siyaasadeed iyo Khilaafyo Beeleed oo raad ku yeelan kara Maamulkiisa iyo Ammaanka Guud ee Jubbooyinka.